Inkcazo yedish ngeFotohop. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Inkcazo yedish ngeFotohop.
ULaura Carro | | Ukufota, Photoshop, Amaqhinga
Nokuba kungumboniso weplate okanye ukonwaba okwexeshana, xelela abahlobo bethu ukuba silungiselela isidlo esihle, okanye senze izimvo zokubuyisela ngaphandle kokuba nexesha lokulungisa ukutya; esi sifundo siya kukufundisa sebenzisa ukusikwa kunye nezithunzi Ukutshatisa ukwakhiwa kweharmonic kunye nokutya, isiselo kunye nokunye.
Ngeli xesha siza kwenza i- ipleyiti yesidlo sakusasa kunye nezinye iziqhamo, isonka kunye neti. Ungayilungelelanisa nezinto ozithandayo, ukusuka kwiziselo ezininzi, okanye ukutya, ikofu okanye ibhiya, iziqhamo kunye nemifuno, okanye ukutya okukhawulezayo.
Siqala ngemifanekiso esiza kuyifumana yecandelo ngalinye eliza kuboniswa kulwakhiwo, kunye nembasa okanye ikomityi esiya kuyisebenzisa ukwazisa ezi zinto.
Siza kukubonisa inkqubo kunye nenxalenye enye kuphela, ukusukela ngoko iya kuba malunga zivelise inkqubo efanayo kwamanye amacandelo.
Sithatha erasert sikhetha ikhonto kwaye siyacima yintoni eseleyo.
Kule meko, sithatha isiqwenga se-apile esishiyekileyo kwaye sikope ukukwenza ngakumbi. Kuba maleko ophindiweyo sisebenzisa iremote I-CTRL + J, kwaye emva koko sijikeleza umfanekiso kancinci ukuze zonke izalathiso zibonakale.
Emva koko ukwenza izithunzi esizenzayo cofa kabini kumfanekiso kwaye iphaneli elandelayo iya kuvela.
Apha siza kuya Isithunzi esifanayo, kwaye ukusuka apho siya kuhlala kwisithunzi, sithathela ingqalelo isithunzi esele senziwe yiplate yakho okanye indebe esiyisebenzisayo njengemvelaphi, okanye njengomfanekiso wokuqala esiza kuqala kuwo. Kule meko simisele i-angle ye-28%.
Khumbula ukuba ukuba sinyusa izinto, ziphakamile isithunzi esingaphezulu baya kusiveza, Kwaye indawo esasazeke ngakumbi kufuneka ifane. Ukulungiselela ezi nkcukacha kufuneka lungisa ubungakanani kunye nokususa yesithunzi esifanayo, esichaze apha ngasentla.
Nje ukuba yonke into ihambelane neenkcukacha zezithunzi, siphinda inkqubo kwezinye izinto. Singakwazi nokwenza cofa ekunene kuludwe kwaye ukhethe ukhetho Khuphela isitayile sendlela, kunye nokuCola isitayile somaleko, ukuyenza ikhawuleze.
Ukuba sifuna kwakhona, kulwakhiwo lokugqibela sinokongeza isihluzo esifunde kuso izifundo zangaphambili, ezinje ngokuDibana noMbala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Inkcazo yedish ngeFotohop.
Smartify yi "Shazam yobugcisa" app echaza imizobo evela kwiimyuziyam kwihlabathi liphela
Isikhumba seTiger ngeFotohop.